Finger- ညစာစားပွဲညစာစားပွဲ; ဒီနေ့, Foodmeter | Androidsis
Finger- ညစာစားပွဲညစာစားပွဲ; ဒီနေ့အစားအစာမီတာ
Cristina Torres နေရာချထားပုံ | | Android application များ
ချက်ပြုတ်ခြင်းကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကို Google Play တွင်တိုးမြှင့်ထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်အရာအားလုံးအတွက်အထူးစိတ် ၀ င်စားမှုရှိသည်။ ကျန်းမာစွာ စား၍ အားကစားလုပ်ခြင်းသည်များစွာသောလူများအတွက်စွဲလမ်းမှုဖြစ်လာပြီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းနှင့်စမတ်နာရီများသည်ဤလုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်အချိန်အလုံအလောက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သောကယ်လိုရီပမာဏကိုမည်မျှအတိုင်းအတာအထိစားနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်ထိုအက်ပလီကေးရှင်းများထဲမှတစ်ခုကိုဖော်ပြလိုသည်။ အမည်ရှိ Foodmeter သည်သင်၏လက်ချောင်းများကိုထမင်းနှင့်စားခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Applications အပိုင်းတွင်ယနေ့၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်.
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Foodmeter အက်ပလီကေးရှင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသင်ကထောက်ပံ့ပေးသောဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာကြောင့်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟုအများဆုံးပြည့်စုံကယ်လိုရီကောင်တာတစ်ခုကမ်းလှမ်းရန်ကတိပေးထားတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်အစားအစာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အစားအစာများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လည်းသင်ပါဝင်တဲ့ဒြပ်စင်အမျိုးအစားအားလုံး၏အနှစ်ချုပ်ကိုရရှိပြီးသင်မျှတတဲ့အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းရှိမရှိလေ့လာခြင်းအားဖြင့်လည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မတူညီ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ¿သင် Foodmeter သိချင်ပါတယ်?
1 Foodmeter - အစားအစာကိုစွဲလမ်းသူများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်း
Foodmeter - အစားအစာကိုစွဲလမ်းသူများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်း
ရေးသားသူ: Ebersalud ကွန်ယက်
အလွန်ပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်များကိုရရန်သင်လျှောက်လွှာကိုအချိန်များစွာအပ်နှံရန်လိုအပ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစား၊ အရွယ်နှင့်ကျားမဆိုင်ရာအကြံပြုထားသည့်တန်ဖိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂရပ်ဖစ်ကိုရရှိနိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်အိတ်ဆောင်အာဟာရရှိသူနှင့်တူသည်။။ အမှန်မှာ၊ ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ပျော်စရာစားသောအစားအစာများကိုညွှန်ပြရန်အချိန်ကုန်ရခြင်းကိုမှန်ကန်စေသည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်အထိဒေတာသည်လုံးဝလက်ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။
မင်းဆိုရင် Foodmeter အက်ပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပါ ပြီးတော့သင်ဟာတစ်နေ့တာလုံးအစာကျွေးခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုလိုက်နာပြီးသင်ဤကဲ့သို့သောဂရပ်ကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းအားဖြင့်အဆီများ၊ ပရိုတိန်းများ၊ ၎င်းသည်သင်တစ်နေ့တာအတွင်းစားသုံးခဲ့သည့်ကယ်လိုရီများကိုသိရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်ဤတန်ဖိုးများအားလုံးကိုလည်းသိရုံသက်သက်ဖြစ်သည်။ ဒီအကြံဥာဏ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ ဟုတ်ပါတယ်, ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းထက်ကာယကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်သူအားလုံးသည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းတွင်အလွန်မဟာမိတ်အဖြစ်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် foodmeter အယူအဆ သို့သော်သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာကိုအကဲဖြတ်ရန်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း၏အကြံအစည်သည်သင့်အားမယုံကြည်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောအစားအစာများ၏အာဟာရတန်ဖိုးများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုပြသသော၊ ပြသမှုများနှင့်ခွဲခြားထားသောအဖွဲ့အစည်းသည်တည်နေရာအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အချို့သောအာဟာရများရရှိရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အပြုသဘောမရှိကြဟုသင်ပြနိုင်သည် သငျသညျကျန်းမာအစားအစာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စဉ်းစားမိတယ်။
မင်းဘာပြောတာလဲ၊ သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာကိုလှည့်ဖျားပါ ညစာနှင့်လက်ညှိုးထိုးခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာအပိုင်း၏ဇတ်ကောင်များနှင့်လက်ချင်းတွဲပါသလော။
- ကောင်းမွန်သော graphical interface
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Finger- ညစာစားပွဲညစာစားပွဲ; ဒီနေ့အစားအစာမီတာ
Alcatel သည်ရေစိုခံ Go Play ဖုန်းနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သော Go Watch ကိုပြသသည်
ZTE သည်ဥရောပ၊ လက်တင်အမေရိကနှင့်အာရှအတွက် Axon Elite ကိုကြေငြာခဲ့သည်